पाठेघर झर्नुका कारण,यसको उपचार तथा रोकथामका उपायहरू – जनस्वास्थ्य खबर
पाठेघर झर्नुका कारण,यसको उपचार तथा रोकथामका उपायहरू
प्रा.डा. गणेश दंगाल,२६ साउन। पाठेघर महिलाको शरीरको तल्लो पेटमा रहने थैली आकारको प्रजनन अंग हो। पाठेघरलाई गर्भाशय पनि भनिन्छ। महिनाबारीको समयमा रक्तश्राव यहीँबाट हुन्छ र महिला गर्भवती हुँदा गर्भको बच्चा यसै थैलीभित्र हुर्किन्छ। पाठेघरलाई वरिपरिका मासंपेशी र तन्तुले आफ्नो ठाउँमा अड्याइराखेको हुन्छ। विभिन्न कारणले गर्दा पाठेघरलाई आफ्नो ठाउँमा थामेर राख्ने मासंपेशी र तन्तु कमजोर हुन जान्छन्। फलस्वरूप पाठेघरको केही भाग वा सिंगै पाठेघर योनिसम्म वा त्योभन्दा बाहिर निस्किन्छ। यो अवस्थालाई पाठेघर झरेको वा आङ खसेको भनिन्छ। यो समस्या उपचार गरेर निको हुन्छ।
प्रसव अवस्थामा बच्चा छिटो जन्मियोस् भनेर महिलाको पेटलाई बेस्सरी थिच्नु।
बच्चा जन्मिसकेपछि सालनाल छिटो निकाल्न भनेर आमाको तल्लो पेटलाई बेस्सरी थिच्नु।
सुत्केरी भएको ६ हप्ताभित्र गह्रौँ भारी उठाउनु र गाह्रो काम गर्नु।
प्रा.डा. गणेश दंगाल काठमाडौं मोडल अस्पतालमा कार्यरत छन्/नागरिक बाट